Zava-misy ny Android Wear 2.8 ary mamela vaovao marobe | Androidsis
Vaovao tsara ho an'ny mpampiasa manana famantaranandro miaraka amin'ny Android Wear 2.0. Satria ny fizarana vaovao an'ny rafitra fiasa ho an'ny famantaranandro dia manomboka zaraina amin'ny Play Store. Izy io dia Android Wear 2.8, izay miaraka amin'ny vaovao manandanja ho an'ireo mpampiasa. Ka ity dia fanavaozana lehibe ho an'ny mpampiasa amin'ny famataranandro miaraka amin'ny Android Wear 2.0.
Ankoatra izany, dia mahatratra ireo mpampiasa rehetra izay miasa miaraka amin'ity kinovan'ny rafitra fiasa ity ny famantaranandrony. Ity dia fanavaozana misaraka amin'ny fanavaozana ny rafitra Android Oreo. Satria izany dia mahatratra ny famantaranandro farany indrindra eny an-tsena. Inona no vaovao ilaozan'ny Android Wear 2.8 amintsika?
Ireo no zava-baovao roa avelan'ity kinova vaovao ity ho antsika. Toa vitsy izy ireo, saingy manan-danja lehibe tokoa. Ka ho fiovana miavaka izy ireo ho an'ireo mpampiasa izay mampiasa famantaranandro marani-tsaina. Ireto no vaovao ilaozan'ny Android Wear 2.8 amintsika:
1 Lahatsoratra bebe kokoa amin'ny fampandrenesana
2 Lohahevitra maizina
3 Ahoana ny fomba hanavaozana
Lahatsoratra bebe kokoa amin'ny fampandrenesana
Ny fahitana fampandrenesana dia faritra iray izay mbola nanana toerana hanatsarana azy. Toa hitan'izy ireo avy tany amin'ny Google ihany koa izany, satria nihatsara io lafiny io amin'ny Android Wear 2.8. Manomboka izao dia aseho ny endrika vaovao azonao atao zahao indray mipetaka ny hafatra misy hafatra. Ka amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny mpampiasa dia tsy mila mikorisa mahita ny atin'ny hafatra rehetra. Amin'izao fomba izao mora kokoa ny maka sary an-tsaina ny fampandrenesana.
Ny fiovana hafa izay tonga amin'ny rafitra fiasa ho an'ny famantaranandro dia misy fiantraikany amin'ny interface. Satria havaozina izy io. Miala amin'ny loko volondavenona misy loko mainty izay misy mandraka ankehitriny lohahevitra maizina vaovao. Amin'izany fomba izany dia mainty ny ambany amin'ny vatasarihana fampiharana na ny bara fanovana haingana. Ny antony dia izany Ny fampisehoana OLED amin'ny famantaranandro dia handany herinaratra kely kokoa. Ka fomba tsotra ho an'ny Android Wear 2.8 io mba hitsitsiana hery kely.
Ahoana ny fomba hanavaozana
Raha te-hanavao ianao dia mila manao izany fotsiny jereo raha efa misy ny fanavaozana ny Android Wear 2.8. Noho izany dia mila miditra ao amin'ny Play Store fotsiny ianao amin'ny famantarananao. Mandehana any amin'ny fiseraserako ary any ianao afaka manamarina raha misy fanavaozana misy na tsia. Safidy iray hafa ny mikaroha ny fampiharana Android Wear ao amin'ny fivarotana app ary jereo raha efa misy fanavaozana azo atao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Tonga eto ny Android Wear 2.8 ary mitondra vaovao
WhatsApp Pay dia ho tonga any India amin'ny volana manaraka
Ireo no masontsivana ao amin'ny LG X4 Plus, finday misy fanamarinana miaramila